Home Wararka Maxa ka soo baxay kulankii Ganacsatada beesha Ceyr & Rooble/Qoor Qoor? Maxaa...
Maxa ka soo baxay kulankii Ganacsatada beesha Ceyr & Rooble/Qoor Qoor? Maxaa isbadalay?
Dhowr cesho ka hor waxa magaaladda Dhusamareeb safar qarsoodi ah ku tagay labo nin oo kamida ganacsatada ugu waaweeyn Soomaaliya ee ka soo jeeda beesha Ceyr ee Habargedir. Ragaan oo kireystay diyaar gaar ah oo iyaga kaliya qaas u ahayd ayuu safarkoodu la xiriiray arimaha doorashooyinka ee ka socda Galmudug.
Ganacsade Xuseen Goleey iyo Ganacsade Maxamed Deelaaf ayaa ka dib markii ay tageen magalaada Dhuusamareeb waxa ay kulan albaabada u xiran yahay la galeen Axmad Qoor Qoor iyo RW Maxamed Rooble oo xiligaas ku sugnaa magalaadda Dhuusamareeb.
Kulanka ayaa ahaa mid looga hadlayay in xildhibaano gaar ah laga soo saaro beeshe Ceyr iyaga oo labadaas ganacsade balan qaaday in ay bixinayaan lacag cadadka ay doonto ha ahaatee. Labadaan ganacsade oo gadaal ka haga siyaasadda beesha Ceyr inta badan la shaqeeysta dowlad kastaa ee hogaanka dalka qabato ayaa safarkoodii Dhuumareeb uu u muuqdaa mid ay ku soo hungoobeen taabagalinta qorshahii ay ugu safreen inay la soo kulmaan Qoor Qoor iyo Rooble oo wada jooga.
Maxamed Deelaf oo ehel hoose la ah Cabdisamad Macalin Maxamuud oo horay u soo noday wasiir iyo xidhibaan ahana wiilka uu dhalay Macalin Maxamuud, isla markaa ay xidid yihiin Xuseen Golley ayaa waxa ay ka codsadeen Qoor Qoor iyo Rooble oo wada jooga in Cabdisamad Macalin Maxamuud la siiyo kursiga beesha Cabsiiye si loo joojiyo dagaalka u dhaxeeya Ururka Ahlu Sunna iyo dowlad Goboleedka Galmudug.
Qoor Qoor oo aan lahayn awood uu wax kuu diido ama uu ku aqbali karo ayaa sheegay in uu isagu awood u leeyahay in wax ka badali karo 5 kursi oo kali ah inta kalana ay awodeeda leeyihiin Farmaajo iyo Fahad. Qoor Qoor hor fadhiga RW Rooble ayaa yiri “aniga iyo Rooble waxba kama qaban karno in aan kursi yaala Galmudug aan qof siino ilamaa aan amar ka helno Farmaajo ama Fahad Yasin, Ra’iisal Wasaare oo sax ma aha”. Rooble ayaa madaxa luxay isaga oo ayiday hadalka ka soo yeeray Qoor Qoor.
Labadaan ganacsade ayaa sidoo kale isku dayay in ay codsadaan in labada kursi ee kale ee beesha leedahay ay iyagu talo ku lahaadaan cida la siin karo. Nasiib xumo waa lagu gacan seyray. Maxamed Deelaaf iyo Xuseen Golley ayaa goobta ka sheegay inay lacag badan galiyeen ninka la yiraahdo Qoor Qoor inta uusan madaxweynaha noqon laakiin uu ku abaal furay.
Labadaan ganacsade (Deelaaf iyo Goleey) ayaa dhaqaale badan ku bixyay joogaanka Farmaajo iyo Fahad Yasin, waxa ayna si dadbdan u taageersanyihiin Farmaajo iyaga oo ka dhex arka dano ganacsi. Labadaan nin ayaa ka soo naqday Dhusamareeb iyaga oo gacan maran, lana soo ilhaanaystay.